Mabhuku 8 ekuisa kuravira kwakanaka uye kunotapira mumuromo mako | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Novela, Romance novel
Hatina kubvisa matambudziko, asi isu tichafanirwa kudaro tora kuravira kwakanaka kumashure chero. Iyo mabhuku ivo sarudzo yakanaka yekuiwana. Uku kusarudzwa kwe 8 mazita —Kubva kuzvakasiyana-siyana kusvika kuzvinhu zvinotengeswa zvenguva pfupi yapfuura - uko kuravira kunotapira kana kune munyu kuchikura kwazvo munhau dzadzo.
1 Mubiki waCastamar - Juan M. Núñez
2 Iyo Chocolate Mansion - Maria Nikolai
3 Violet Kuda - Martine Bailey
4 Ndimu chingwa nechingwa chepoppy - Cristina Campos
5 Semvura yechokoreti - Laura Esquivel
6 Pakati peguruva nesinamoni - Eli Brown
7 Makota mashanu eOrange - Joanne Harris
8 Almond keke nerudo - Vngela Vallvey
Mubiki waCastamar - Juan M. Núñez
Isu tinotanga nenyaya iyi yakaiswa muSpain ye 1720 nemidziyo yemhando iyi: kunyengera, kuda, shanje, zvakavanzika uye manyepo. Nyeredzi Clara, musikana wechidiki kubva munyasha, anotambura agoraphobia sezvo akarasikirwa nababa vake pakarepo. Ndiyo shasha yekubika uye nekuda kweizvi anokwanisa kuwana iyo Duchy weCastamar.
Ikoko zvinogumbura kudzikama uyezve kusava nehanya kuvapo kwe Don Diego, Mutungamiriri, uyo mushure mekufirwa nemukadzi mutsaona, anogara ari ega uye ega akatenderedzwa nebasa. Asi Clara achakurumidza kuona kuti kudzikama uku kungave kuri kuda kuputika.
Izvo zvakangova sarja terevhizheni ye 8 zvitsauko yakaitwa neA3Media uye premieres mwedzi uno.
Imba yemachokoreti - Maria Nikolai
Imwe yazvino ichangopfuura bestseller yakabudirira kwazvo yakanyorwa nemunyori wechiGerman we yerudo nhoroondo yenhau.
Inowanikwa pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX mu Stuttgart, ine protagonist Judith Rothman, mwanasikana wefuma chokoreti mugadziri. Yakagadzirirwa kuita roorano yakanaka uye kuva nevana kuti vawane yake nhaka, iye achave nezvimwe zvishuwo, senge kutora chinzvimbo yakakosha mukambani. Zvakare, kuroora usina kudanana hachisi chikamu chehurongwa hwavo.
Panguva imwecheteyo, amai vake, Hélène, akasununguka-akasununguka uye ane shungu, ari kurapa kuzorora kuLake Garda uye ikoko anowana kuti achine nguva yeku chinja hupenyu hwako husina kugadzikana kuGerman neimwe yakazvimiririra mu Italia.
Kuda violets - Martine Bailey
Hatifambe kubva kudzimba huru kana zvinwiwa mumakicheni mune imwe nyaya yakaiswa mukati mavo. Heino imba yacho Mawton hall uye protagonist inodaidzwa Biddy leigh, kukurumidza mubatsiri wemubiki, uyo anoda kutanga mhuri naJem Burdett uye ovhura yake tavern. Asi riini changamire geoffrey, ishe wake wekare, anoroora vadiki uye enigmatic Mukadzi carinna, Bhidhi inobatanidzwa mune yewebhu yezvinyengeri, zvakavanzika nenhema, pamwe nerwendo rwekuItaly pakati.
Ndimu chingwa nechingwa chepoppy - Cristina Campos
Kwave kuri kukuru kunyorwa kubudirira uye kunyangwe director Benito zambrano atora iyo firimu vhezheni, zvakare akapfurwa muMallorca, uko kunoitika rangano. Ikoko, mutaundi diki remukati megungwa, Anna naMarina, piri hanzvadzi vakaparadzaniswa muhudiki hwavo, vanosangana zvakare kutengesa a kubheka iyo yavakagara nhaka kubva mukadzi asinganzwisisike wavanofunga kuti havazivi. Iva hupenyu hwakasiyana kwazvo uye nepo Anna achangobva pachitsuwa uye achiri akaroorwa nemurume waasingachade, Marina anofamba nyika nekuda kwebasa rake mune NGO.
Semvura yeChocolate - Laura Esquivel
Un dzekare uye kune iri zita naLaura Esquivel, zvakare neayo inoenderana vhezheni yeiyo bhaisikopo, iyo yakatisiya - uye ichienderera ichisiya - yakanakisa kuravira. Iyo ine chokoreti uye imwe ine zvisingaite nyaya yerudo chii chakakosha pakati tete, protagonist, uye Pedro. Ngatirangarirei kuti pane nzira yechitsauko neakawanda mashiripiti
Pakati peguruva nesinamoni - Eri Brown
Mapiraira uye chikafu. Chii chine zvakawanda zvinonaka kupfuura musanganiswa uyu? Yakagadzwa muna 1819, inotaura nyaya ya Owen wedgwood, mubiki ane mukurumbira anozivikanwa sa "Kesari weSosi", uyo anopambwa neboka revapambi vanotungamirwa nemukadzi, iye Kaputeni Hannah Mabbot. Iye achamuita kuti azive kuti anogona chete kuponeswa kana Svondo yega yega, pasina kukundikana, anomupa chikafu chakanakisa.
Makota mashanu eorenji - Joanne Harris
Harris ndiye zvakare munyori we Chocolat, Saka ramba uchiwedzera munuhwi nemusoro uyu kuti nyeredzi Framboise, mukadzi anoyeuka zvinoyevedza uye manzwiro ake hudiki muFrance, pakati pekuoma kwehondo, uye kunyanya ne chiitiko iyo yakaratidza kuguma kwehupenyu hwake uye hwemhuri yake. Nechekare mukukura, Framboise achafanirwa kutarisana neiyo yakapfuura.
Almond keke nerudo - Angela Vallvey
Isu tinosiya zvakapfuura uye tinopera mune zviripo nenyaya iyi naAngela Vallvey ane protagonist ari Fiona, mukadzi wechidiki, nherera naamai, vanochengeta baba vavo vanorwara uye vasingazive mabikirwo. With zvinetso zvakare ne marara echukafu uye yakatobikwa, zvainoziva kuti chii amar. Akave ari murudo hupenyu hwake hwese naAlberto, uyo achangodzokera kuguta. Chinhu chakashata ndechekuti akatanga kufambidzana naLylla, iye muvengi akanakisa isu tese tine. Asi zvino muperekedzi waFiona kuchikoro anomukoka kuzodya masikati rimwe zuva ndokumusuma kuna tete vake Mirna, mubiki wechinyakare. Uye zvese zvichachinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mabhuku 8 ekuisa kuravira kwakanaka uye kunotapira mumuromo mako